Rano tsy tetezin-doha · RAHELY’S Blog – Tous ensemble pour Madagascar – Madagasikara, Malagasy miara-misikina
> Rano tsy tetezin-doha
« Ny rano sotroina tsy tetezi-doha ».
Midika koa izany fa eny amin’ny fiainana eny dia tsy voatery foana hikaroka izay niavian’ny zavatra iray satria mety handiso fanantenana izany.
Fantatra fa raha hotete-doha ilay rano dia tsy hisotro ilay mpisotro ! tena marina io ! Alaivo an-tsaina anie é!
Misaotra fa tena lalina be tokoa ny fahaizan’ny Ntaolo an !